TỌGHARIA PASWỌỌDỤ NA WINDOWS - NDOZI NA MWEGHACHI - 2019
Isi Ndozi na mweghachi
Tọgharia paswọọdụ na Windows
Enwere ikpe dị otú ahụ mgbe ịkwesịrị ịtọgharịa paswọọdụ gị: ọma, dịka ọmụmaatụ, ị debere paswọọdụ n'onwe gị wee chefuo ya; Ma ọ bụ bịa na ndị enyi na-enyere aka ịmepụta kọmputa, mana ha maara na ha amaghị paswọọdụ onye nchịkwa ...
N'isiokwu a, achọrọ m ịmepụta otu n'ime ụzọ kachasị elu (n'echiche m) na ụzọ dị mfe iji tọgharịa paswọọdụ na Windows XP, Vista, 7 (na Windows 8 Enweghị m ịlele ya onwe m, kama ọ ga-arụ ọrụ).
N'ihe atụ m, m ga-atụle ịtọgharịa paswọọdụ onye nchịkwa na Windows 7. Ya mere ... ka anyị malite.
1. Ịmepụta flash mbanye / diski iji tọgharịa
Iji malite ọrụ nrụgharia, anyị chọrọ windo ngwa ngwa ma ọ bụ diski.
Otu n'ime software kachasị mma maka mgbake ọdachi bụ Trinity Rescue Kit.
Site na saịtị: //trinityhome.org
Iji budata ngwaahịa ahụ, pịa "Lee" n'aka nri na kọlụm na isi peeji nke saịtị ahụ. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
Site n'ụzọ, ngwaahịa software ị na-ebudata ga-adị na ihe oyiyi ISO ma rụọ ọrụ na ya, a ga-edere ya na kọmputa ma ọ bụ diski (ya bụ, mee ka ha na-agagharị).
N'okwu ndị gara aga, anyị atụleworị otu ị ga - esi gbaa ọkụ diski, draịva flash. Ka m ghara ikwughachi, m ga-enye naanị njikọ abụọ:
1) dee windo ngwa ngwa (n'ime isiokwu anyị na-ekwu maka ịdepụta flash drive na Windows 7, mana usoro ahụ adịghị iche, naanị ma e wezụga ihe oyiyi ISO ị ga-emeghe);
2) gbanye CD / DVD.
2. Ntọala ederede: nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ị na-agbanye kọmputa na foto dị n'ihu gị, banyere otu ọdịnaya dị ka nseta ihuenyo dị n'okpuru. Windows 7 bu bu, na-agwa gi ka i tinye okwuntughe. Mgbe ị nwara nke atọ ma ọ bụ nke anọ, ị ghọtara na ọ bụ ihe na-abaghị uru na ... tinye windo USB flash nwere ike ịnweta (ma ọ bụ disk) nke anyị kere na nzọụkwụ mbụ nke isiokwu a.
(Cheta aha akaụntụ ahụ, ọ ga-abara anyị uru.) N'okwu a, "PC".)
Mgbe nke ahụ gasịrị, maliteghachi kọmputa ahụ ma bugharịa site na USB flash drive. Ọ bụrụ na ị nwere Bios ahazi n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ foto na-esonụ (Ọ bụrụ na enweghi, gụọ isiokwu banyere ịtọlite ​​Bios maka ịbịpụta site na USB flash drive).
N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ahịrị mbụ: "Gbaa Trinity Rescue Kit 3.4 ...".
Anyị kwesịrị ịnwe menu na ọtụtụ nhọrọ: anyị bụ isi nwere mmasị n'ịtọgharị paswọọdụ - "Windows paswọọdụ resetting". Họrọ ihe a ma pịa Tinye.
Mgbe ahụ, ọ kachasị mma iji mepụta usoro ahụ ma họrọ ọnọdụ mmekọrịta: "Winpass interactive". Ntak-a? Ihe bụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ usoro arụmọrụ arụnyere, ma ọ bụ aha onye nchịkwa anaghị akpọ aha dị ka ndabara (dị ka ọ dị na ya, aha ya bụ "PC"), mgbe ahụ, usoro ahụ ga-achọpụta nke ọma na paswọọdụ ị chọrọ iji tọgharịa, ma ọ bụ ma ọlị. ya
A ga - achọta nke ọzọ usoro sistemụ arụnyere na kọmputa gị. Ịkwesịrị ịhọrọ otu ịchọrọ ịtọgharịa paswọọdụ gị. N'okwu m, Os dị otu, yabụ m na-abanye "1" wee pịa Tinye.
Mgbe nke a gasịrị, ị ga-achọpụta na ị na-enye ọtụtụ nhọrọ: họrọ "1" - "Dezie data njirimara na paswọọdụ" (dezie paswọọdụ ndị ọrụ OS).
Ma ugbu a anya: a na-egosi anyị niile ndị ọrụ OS. Ị ga-abanye ID nke onye ọrụ onye okwuntughe ịchọrọ ịtọgharịa.
Ntọala bụ na na kọntaktị Aha njirimara a na-egosipụta aha akaụntụ ahụ, n'ihu akaụntụ anyị "PC" na kọlụm RID enwere njirimara - "03e8".
Ya mere, tinye usoro: 0x03e8 wee pịa Tinye. Ọzọkwa, akụkụ 0x - ọ ga-anọgide na-adịgide adịgide, na ị ga-enwe njirimara nke onwe gị.
Ọzọ a ga - ajụ anyị ihe anyị chọrọ ime na paswọọdụ: họrọ nhọrọ "1" - ehichapụ (Kọwaa). Okwuntughe ohuru kacha mma ka emesia, na nchịkwa ihe nyocha na os.
Ehichapụla paswọọdụ ọ bụla!
Ọ dị mkpa! Ruo mgbe ị ga-apụ na ọnọdụ nrụpụta dị ka atụle anya, agbanweghị mgbanwe gị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịmalitegharịa kọmputa - paswọọdụ agaghị abanye! Ya mere, họrọ "!" ma pịa Tinye (nke a bụ ịpụ apụ).
Ugbu a, pịa igodo ọ bụla.
Mgbe ị hụrụ windo dị otú a, ị nwere ike wepu USB flash drive wee malitegharịa kọmputa ahụ.
Site n'ụzọ, OS buut gara flawlessly: enweghị arịrịọ ịbanye na paswọọdụ na desktọọpụ ozugbo pụtara n'ihu m.
N'isiokwu a banyere ịtọgharịa paswọọdụ onye nchịkwa na Windows agwụla. Achọrọ m ka ị ghara ichefu okwuntughe, ka ị ghara ịnata ahụhụ ma ọ bụ wepụ ha. Ihe kacha mma!
https://termotools.com ig.termotools.com © Ndozi na mweghachi 2019